Maaskarada qasabka ah iyo dhiirrigelinta wada shaqeynta shaqaalaha ee kara: halkan waa waxa laga xusuusto nooca cusub ee borotokoolka qaranka ee caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha goobta shaqada iyadoo loo wajahayo cudurka 'Covid-19', oo daabacaaddiisu tahay waxaa loo qorsheeyay Isniinta Ogosto 31 dhamaadka maalinta.
Maaskaro waajibka ah, haddii ...
Aragti ahaan, maaskarada ayaa qasab noqon doonta, laga bilaabo Sebtember 1, meelaha xiran ee la wadaago iyo kuwa la wadaago. Laakiin ficil ahaan, la qabsiga waxay kuxirantahay wareegga fayraska ee waaxyaha waa suurtagal.
Qeybaha aaga cagaaran, wareegga hoose ee feyraska, waxay noqon doontaa suurtagal in laga tanaasulo waajibaadka xirashada maaskaro haddii ay jirto hawo ama hawo ku filan, shaashadaha ilaalinta ee lagu rakibay inta udhaxeysa xarumaha shaqada, bixinta visada iyo haddii shirkaddu waxay hirgelisay siyaasad ka hortag ah, gaar ahaan magacaabista tixraaca 'Covid' iyo nidaam loogu talagalay maaraynta degdegga ah ee kiisaska dadka astaamaha leh.
Aagga liinta, oo leh wareegga dhexdhexaadka ah ee fayraska, laba xaaladood oo dheeri ah ayaa lagu darayaa sunta
Maaskarada khasabka ah ee ganacsiga ... marka laga reebo qaar ka reeban July 10th, 2021Tranquillus
READ "Waxaan jecelahay inaan iraahdo cilmi baaristu ma ahan orod, laakiin waa maaratoon!"
horeShirkad-ganacsi-yar: taxaddar, hantidaada shakhsiga ah waa lala wareegi karaa!
socdaKumaa bixinaya kharashka maaskarada khasabka ah ee ganacsiga?